QOLOFTA KHAFIIFKA AH EE UKUMAHA DIGAAGA: SABABAHA AY TAHAY IN LA SAMEEYO MARKA LOO EEGO QUUDINTA - BEERAHA DIGAAGA
Kalluumaysatada ayaa badanaa la kulma dhacdooyinka kabaha khafiifka ah ee lakabyada. Tani waa calaamad muujinaysa in digaaggu uu leeyahay dhibaatooyin caafimaad ama uusan ku qanacsanayn deegaanka. Xaaladaha badankood, wax ka qabashada dhibaatadan waa mid sahlan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la ogaado xanuunka waqtigana si dhakhso ah u saxo xaaladda.
Qalab khafiif ah
Sida maqaarka bini-aadamka wuxuu muujinayaa xaaladda jidhka bini'aadamka, sidaa daraadeed marka la eego ukumaha "calaamad" waa ukun. Badeecadani waxay awood u leedahay inay muujiso heerka fitamiinada iyo macaadiinta jidhka digaaga, iyo sidoo kale heerarka noolaha ee hen. Shimbir caafimaad leh oo lagu hayo xaalado wanaagsan marwalba waxay leeyihiin waxyaabo caano ah oo wanaagsan.
Kabaha khafiifka ah waa dhibaatooyin halis ah, taas oo muujinaysa xaqiiqda ah in hen u billaabanayaan inay qaadaan qariib ah, marmar jilicsan ama aad u muuqda oo qumman, nolol shelf oo taas oo aad u gaaban. Si kastaba ha noqotee, mid waa in uusan argagax ahayn, sababaha asaaskani waa mid gaar ah, xalalkuna aad ayay u fudud yihiin.
Ma taqaanaa? Markii la helo ukun digaag ah 9 xabbadood ayaa laga helay.
Waxaa jira dhowr sababood oo muhiim ah oo keena abuurista qolof dhafan. Kuwaas waxaa ka mid ah daryeelka aan habooneyn (dayactirka), nafaqada aan dheellitiraneyn (badi la'aanta kalsiyum iyo fitamiin D), iyo caafimaadka guud ee hen.
Digaagga waxaa loo tixgeliyaa digaagga ugu caansan adduunka, waxaana la siiyaa macno ahaan "gees walba" ee meeraheena weyn. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah jilciyayaashu way iloobaan in ilmo walba uu ku noolaado gobolka uu dareemo raaxo. Dabcan, waxaa jira digaagga oo ku noolaan kara kulaylka iyo qabowga. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira inta badan xoolo-bixiyeyaasha aan xishood lahayn oo aan tixgelin ku habboonayn ku haboonaanta xaaladaha cimilada, taasina waa meesha ay dhibaatooyinku bilaabmaan. Heerkulka aan fiicnayn ama qoyaanku waa duufaan weyn oo shimbiraha ah, oo had iyo jeer soo jiidata waxyaabo badan oo ka mid ah cawaaqibka, sida qolof dhuuban.
Soo ogow faa'idooyinka ukunta digaaga iyo sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo.
Arrinta kale waa is-waafajinta - habka loo qaabeeyo jirka. Haddii ay dhacdo in isbeddelka isbeddelka ah ee is-bedbedelka ah, haadiintu waxay si ku-meel-gaar ah u qaadaan "ukumal ah" oo qumman, isla markaana ugu dambeyntii dhibaatadani way iska tagi doontaa.
Nafaqada aan sinnaanta ahayn waxay keeneysaa xaqiiqda ah in digaagga hilibka dukumiintiga ah uu helayo qadar aan ku filneyn oo ah unugyo muhiim ah iyo fitamiino. Maqnaanshaha maaddooyinka muhiimka ah waxay keenayaan dhibaatadan sida qolof dhuuban. Maadooyinka noocan ah waa:
Fosfooraska (xad-dhaafka cutubkan sidoo kale si xun ayuu u saameeyaa qolofka);
Haddii xaaladaha habnololeedku ay caadi yihiin, cuntadu waxay ku jirtaa dhammaan maadooyinka muhiimka ah ee fara badan, sababaha ugu dambeeya ee xayiraadda qolofka ayaa weli ku sii jiraya, taas oo ah, caafimaadka lakabka laftiisa.
Dhibaatooyinka suurtogalka ah ee yareynta tayada ukunta waa:
walaac joogto ah.
Waa muhiim! Haddii ay jirto sabab loo rumaysto in digaaggu uu dhab ahaantii jirran yahay, waxaa si degdeg ah lagama maarmaan u ah in laga soociyo qoyska oo uu u muujiyo dhakhtarka, sii wadida kormeerka dhammaan dadka (digaagga, nasiib daro, marar dhif ah ayay jiranayaan).
Si aad si fudud ugu qabsato cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo ogaado sababta keentay. Haddii dhibaatadu ay ku jirto cuntada oo keliya - ku dar maaddooyinka lagama maarmaanka u ah cuntada, haddii sababtu tahay cudur - u sheeg dhakhtarka xoolaha isla markiiba bilaabi daaweyn.
Si loo kobciyo cuntada digaaga leh calcium, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro:
Miisaaniyaddani maaha inay si toos ah ugu daraan cuntada.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida loo kariyo quudinta adoo saaraya digaagaha gacmahaaga.
Si fudud u tuur iyaga meel gaar ah ee digaagga digaaga, qoyskiina waxay xoojin doonaan dhirta la xoojiyey marka loo baahdo.
Fosfooraska waxaa lagu dari karaa iyadoo la isticmaalayo alaabooyinkan:
Cuntada lafaha (ugu yaraan 1g halkii 1 lakab maalintii);
Bonemeal wuxuu kaa caawinayaa inuu magdhowo yaraanta fosfooraska cuntada. Sodiyadu waxay ku jirtaa cusbada (si toos ah ugu diyaari raashinka nus gram ah 1 shimbir). Qeybaha soo socda ee digaaga ayaa laga heli karaa firileyda iyo cagaarka cagaaran.
Ma taqaanaa? Dalalka badankood ee dunida oo dhan waxaa lagu dhajiyay aalado digaag ah.
Boronkiitada faafa - Cudurka fayraska ah ee daran oo saameeya habka neefsiga, iyo sidoo kale kelyaha iyo xubnaha taranka. Cudurka waxaa lagu kala qaadaa taabashada walxaha ay saameeyeen (cunto, qashin, biyo). Muddada kabadan waa 3-5 maalmood.
Calaamadaha kale (marka laga reebo qolof dhuuban) waa:
qufac iyo hargab.
Si loo daaweeyo boronkiitada waxaa loo isticmaalaa antibiyootiko gaar ah, sida brovafom, si kastaba ha ahaatee, kaliya xoolaha ayaa calaamadeyn kara oo qori kara daawada lagama maarmaanka ah.
Baro sababaha iyo hababka lagu daaweeyo boronkiitada faafa ee digaagga.
Hargab shimbireed - cudur halis ah, kaas oo lagu gartaa xaqiiqda ah in dhowr fayruusyo nafta halis geliya ay ka soo baxaan jirka shimbir. Kaliya khabiir wuxuu sameyn karaa baaritaan sax ah.
Calaamadaha kale ee hargabka shimbiraha:
Maanta, hargabka avian waa mid aan la daweyn karin. Haddii ay dhacdo infekshin, digaagga waa la dilay waana la tuurayaa.
Waa muhiim! Hilibka digaag xanuun ayaa si adag loo mamnuucay in la cuno.
Encephalomyelitis - Cudurka khatarta ah ee habka dhexe ee dareenka (fayruska waxaa lagu kala qaadaa ukunta). Calaamadaha dheeraadka ah waa:
la'aanta isuduwid la'aan;
Waa suurtagal in la daaweeyo cudurka, laakiin ka hortagga waa mid aad wax ku ool ah, taas oo lagu fulinayo qaabka tallaalka ee digaagga 2 bilood da'da.
Ka akhri cudurrada kale ee suurtogalka ah ee digaagga iyo hababka daaweynta.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah quudiyo isku dhafan, cuntooyinka ay ku qoran yihiin baakooyinka. Noocyo badan ayaa go'aansada in ay karsadaan cuntadooda, iyagoo ixtiraamaya jaantusyada, taas oo kuu ogolaanaysa inaad hubiso in cuntada ay ku jirto maaddada organic.
Kuwa ugu badan waa cuntooyinka soo socda (adeegga waa 1 kg):
sarreen 625 g
Cunto kariye 175 g
burka hoostiisa 75g
hilibka iyo cuntada lafaha 40 g
ku sii daa khamiir 25 g
saliid gabbaldayaha 23 g
baking soda 7 g
cusbo 10 g
macdanta iyo fitamiinada dheeraadka ah 20 g
Si aad u diyaargarowdid, waa inaad isku daraa walxaha oo dhan, maalin walbana waxay ku darsataa qoys digaag.
Qodob kale oo caan ah oo looxa saarayo quudinta caanaha lo'da ayaa ah quudin ku saleysan cuntooyin (1 kg oo adeegaya):
hadhuudh 450 g
digir 70 g
Cunto kariye 70 g
Cuntada cawska 20 g
cusbo 1.5 g
fitamiinnada, macdanta ama kaabsiyada dheeriga ah 150 g
Waa muhiim! Iyadoo la tixgelinayo jiritaanka cusbada miiska cuntada, qaddarka kaas oo lagu xisaabayo lakabka kasta si gooni ah, waxaa lagu dari karaa sidii ugu dambeyntii dhibaatada ka hor "qaybinta" cuntada.
Sidaa darteed, haddii digaagistu ay bilaabeen inay qaadaan "ukun qallafsan", tani waxay noqon kartaa natiijada cimilada cimilada, is-dhexdhexaadinta, dhibaatooyinka caafimaadka, la'aanta fiitamiinada. Xaaladaha intooda badan, way sahlan tahay in lagu xalliyo xaaladda, laakiin waxa fiican in aan loo oggolaan xaaladaha cimilada aan habooneyn, fitamiin la'aanta, iyo sidoo kale inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka kahortagga. Markaas qoyska digaaga ayaa had iyo jeer noqon doona mid weyn.
Video: Waa maxay sababta ay digaagga u jiifeen ukunta jilicsan
Si ukunku u noqdo qolof adag leh - shimbirta waa in ay marka hore caafimaad qabtaa oo hesho nafaqo ku filan.
Oo sidaas daraaddeed dhagax yar yar ayaa weli la siin karaa, guud ahaanna, waa in aan la iloobin - waa lagama maarmaan u ah dheefshiidka haboon.
Cunto-cagaarka cagaaran ayaa si fiican u shaqeeyey - halkaan qiyaasta ukunta sare u kacda, dhumucda qolofka, iyo ukunta dufanka leh ee fitamiinada (xitaa midabkuna wuxuu noqdaa mid liin leh oo casaan leh), si fiican, waxay sii socotaa muddo dheer.